Author: Thit San Khant
XP Wireless Power Bank
ခုနောက်ပိုင်း Wireless Charger နဲ့ သုံးလို့ရတဲ့ ဖုန်းအမျိုးအစားတွေ အမြောက်အများ ထွက်လာပြီးနောက် Power Bank ကိုလဲ Wireless သုံးလို့ရတာတွေ ရွေးလာကြပါတယ် အဲ့ဒီထဲကမှ ကျနော် Longtime အသုံးပြုထားပြီး Error မဖြစ်သေး မပျက်စီးသေးတဲ့ XP Power Bank အကြောင်း မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် Model ကတော့ XP-PW01 တဲ့...
By Thit San Khant Published November 17, 2019 iT Review
Philips HIFI Music Player
ကဲ ဒီတစ်ခေါက်တော့ Online က ရှာရှာဖွေဖွေ ဝယ်ယူထားတဲ့ Philips Music Player လေး အကြောင်း ပြောပြမယ် ငယ်ငယ်တုန်းကလို MP3 Player လေးနဲ့ အေးဆေးငြိမ့်မယ် Music Type အကုန်လုံးနီးပါး Support ပေးရမယ် အရေးကြီးဆုံး ၂ ခု က Battery Life ကြာရှည်ခံပြီး Bluetooth...
By Thit San Khant Published October 13, 2019 iT Review
DATA FROG 4K HD HDMI Game Console
ခုရက်ပိုင်းလေး က တရုတ် ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုမှာ Family Game စက် ပုံစံ Console တစ်ခုတွေ့လို့ USD 50 နဲ့ မှာ ဝယ်ခဲ့တယ် ပုံစံ အမျိုးမျိုး ကွဲပြီး USD 30 ကျော်တန်ထိ ရှိတယ် မဝယ်ခင်တော့ Youtube မှာ သေချာလေ့လာပါ ဒီစက်က ဂိမ်းစက် ၆...
By Thit San Khant Published October 11, 2019 iT Review
နှစ်ပတ်လောက် စမ်းသုံးကြည့်ပြီးတဲ့ အနေအထားရ Music ပိုင်းမှာ ဗျူး ဗျူး ဗြဲ ဗြဲ မဖြစ်ပဲ သေချာတိကျတဲ့ အသံရတယ် Phone Call ပိုင်းမှာ နည်းနည်းဆူတဲ့နေရာမျိုး ဒီဘက်က Voice ကို ဟိုဘက်က တော်တော် နဲ့ မကြားရဘူး အဲ့ဒီ ပြသနာ တစ်ခုရှိတယ် Noise Cancelling ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ဘူး Case...
Earbuds ရွေးချယ်ဖို့ ဆိုတာ
Bluetooth Earbuds တွေဟာ အများအပြားထွက်လာပါတယ်… အောက်ခြေ Airpod အတု တွေက အစ နာမည်ကျော် ဘရန်းတွေ အထိပါ ထွက်ပါတယ်… ကျနော်သုံးဖူးသမျှ မှာ Recommend ပေးရရင် Airpod ကို ဈေးကြီးတယ်လို့ မမြင်ပဲ စိတ်မညစ်ရပဲ စိတ်ကျေနပ်မှု အပြည့်ပေးတယ်လို့ မြင်ပြီး ဝယ်ပါ… အသံပိုင်းဆိုင်ရာရော ဘတ်ထရီခံတာပါ အားသာချက်...
ဒီဇတ်လမ်း ကို စကြည့်တုန်းက ကိုယ့်ကိုကိုယ် နောင်တ ရနေမိတာ ဘာလို့ ဒီပေါတောတော ပုံစံ နဲ့ ကားကို ရွေးကြည့်မိလဲ ဆိုပြီးတော့… ဇတ်လမ်းစတာနဲ့ ကိုယ်လုံးတီး မိန်းမကြီး အဖွားကြီးတွေ က နေတာ စမြင်ရမှာပါ မြင်ရတာ ကျတ်သရေ တုံးလွန်းလို့ အမြန် ကျော်ကြည့်ချင်နေမိပါတယ်.. အဲ့ဒီ အကန့်က ခဏလေးပါပဲ… (ဒီနောက်ပိုင်းကို လုံး၀...
By Thit San Khant Published October 10, 2019 Movie Review
ဒီဇတ်လမ်းမှာတော့ နာမည်ကျော် အန်နာဘယ် အရုပ်ကို လော်ရိန်း တို့ ဇနီးမောင်နှံက နောက်ဆုံးအခြောက်လှန့်ခံရတဲ့ သူတွေဆီကနေ တောင်းယူလာပြီး သူတို့ အိမ် အောက်ထပ်က မကောင်းဆိုးဝါးတွေကို အစီအရင်တွေနဲ့ ချူပ်နှောင်တဲ့အခန်းမှာပဲ မှန်သေတ္တာနဲ့ သော့ပိတ်ထားခဲ့ကြပါတယ်…. လော်ရိန်းမှာ ဂျူဒီ ဆိုတဲ့ သမီးလေး တစ်ယောက် ရှိပြီး ဂျူဒီဟာလဲ လော်ရိန်းလို မွေးရာပါ စိတ်စွမ်းအင်ရှိသူဖြစ်ပါတယ် မကြာခဏ ဆိုသလို...
PayPal ဆိုတာ ဘာလဲ ? October 12, 2019